Tafiditra any amin&amp;#39;ny fonja any Miami - Fonjan&amp;#39;ny afobe subtitles February 22, 2020
Tafiditra any amin&#39;ny fonja any Miami - Fonjan&#39;ny afobe subtitles
Voampanga ho nanao heloka bevava ianao izay nanizingizina fa tsy nataonao. Ianao tsy manan-tsiny mandra-voaporofo fa meloka mazava ho azy, fa mety ho elaela ihany io datin'ny fitsarana io tonga. Mandritra izany fotoana izany dia ny fonenanao no hantsoina hoe Japoney Mega Jail. Mbola tanora ianao ary, tsy mbola nigadra mihitsy taloha ary tsy olona henjana ianao, koa rehefa nentina any amin'ny gorodona izay hipetrahanao ianao fa tsy hino izay hitanao. Vondron'olona sela feno lehilahy, nihorakoraka, niantsoantso, nanatona ny bara sy nandrahona ianao. Miteraka korontana izany. Ny fiandrasana anao ao amin'ny efitranonao dia komity fandraisana olona lehilahy 20 tezitra sy mampidi-doza. Tsy manan-java-misy amin'ireo bandy ireo ianao fa mila miady, ary aza manadino izany. Vao niditra teo amin'ny sehatry ny ady an-tany ianao. Sarotra ny misafidy izay fonja faratampony ratsy indrindra any Etazonia satria mampalahelo fa misy marobe toerana izay afaka mifaninana mba ho eo an-tampony, na angamba azontsika lazaina ambany, ao amin'ilay lisitra. Izay rehetra nijanona teo amin'ilay toerana horesahantsika anio dia tsy ho sosotra nifidy izany ho ratsy indrindra isika, azo antoka izany. Tokony hiteny isika fa raha miresaka amin'ireo mpanao heloka bevava efa niditra sy nigadra ianao sy fonja matetika dia hiteny aminao hoe ratsy kokoa ny fonja. Betsaka ny olona milaza fa mahery noho ny fonja ny fonja ary mahery setra kokoa. Ilay toerana resahantsika anio dia nantsoina hoe: "Afobe ao amin'ny Paradisa" ary aorian'io ny fikarohana ataontsika dia tsy hanaiky. Ny tena resahantsika dia antsoina hoe "Miami-Dade Corrections and Rehabilitation." Sampana ”, izay misy ny vondrona maro ao anatin'izany ny toby Boot Camp malaza. Ireo tsy mandalo izany toby izany dia hiafara any am-ponja ary ny sasany amin'izy ireo dia mbola tamin'ny tanorany. Ny Boot Camp dia tantara hafa tanteraka, fa kosa hoy isika raha oharina amin'ny fonja dia toby fialantsasatra. Ny rafitra iray manontolo dia mipetraka manodidina ny olona 7000, na dia misy toa ny olona 11000 000 aza mandalo eo am-baravarana isan-taona - izany dia eo amin'ny 312 isan'andro. Toerana sahirana io, azo antoka. Mbola misy ihany anefa ny rafitra fonja faha-7 lehibe indrindra any Etazonia. Ny ankamaroan'ny voafonja dia tsy handany fotoana be ao ary ny fotoana salan'isa amin'ny fandaharana manontolo vao 22 andro fotsiny, fa ho hitanao ihany koa ireo olona niandry fitsarana raha mbola hatrizay dimy taona. Izany dia mitondra antsika amin'ny iray amin'ireo vondrona lehibe, ilay toerana iray izay tena lohalaharana indrindra amin'ny lohateny noho ny toe-piainana feno habibiana. Antsoina hoe «Pre-Trial Det Center Center», na nantsoina hoe Jeneraly Mainty. Matetika izy ireo dia mipetraka eo amin'ny olona 70000 isaky ny mandeha. Ny ankamaroan'ny olona dia mbola misy tsy manan-kery ara-teknika satria tsy mbola voaporofo meloka, fa miandry ny datin'ny fitsarana mety haharitra taona maro. Tsy mora ny manoritra rehefa misy karazana limbo, ary raha mandalo ireo sela ianao gorodona sasany dia ho hitanao hoe manao ahoana ny fiainana. Misy ny gadra izay miala mihitsy aza fa miady amin'ny tranga misy azy ireo satria te-hahazo fotsiny raha any ivelany, tsy manan-tsiny na tsia, tadiaviny fotsiny no hidirana am-ponja. Ny gorodona ratsy indrindra dia aiza no itehirizan'ireo voalaza fa meloka izay tena mampidi-doza ary ireo rihana dimy sy enina. Ny sela eto matetika dia mipetraka ao amin'ny lehilahy 15 ka hatramin'ny 25 ary ao anatin'ity vondrona ity karazana ambaratonga iray. Araky ny ilazan'ireo bandy ao azy dia maro no mahavelona azy, ka raha tsy izany ianao ny mpiady mety ho sahirana ianao. Mila bunk kely ianao, mila miady amin'izany ianao. Eny, tsy mampaninona anao ny manana toerana ratsy indrindra ao amin'ny sela, fa ahoana kosa raha misy olona maka ny entanao? Araka ny nolazain'ny voafonja iray tao, "manararaotra ny malemy aho." Raha tsy miady amin'ny zavatrao ianao dia hanana helo iray, ary midika izany isika ao ny ratsy. Raha mandroritra ianao dia ho voadaroka na aiza na aiza alehanao raha tsy voaaro ianao. Araka ny nolazain'ny voafonja iray tamin'ny resadresaka tamin'ny andro voalohany taminao tao amin'ny sela iray dia mila miady ianao tsotra fotsiny satria te-hanadino anao izy amin'ny maha lehilahy. Fa nahoana? Ny valinteniny dia raha tsy miady ianao dia marika fa misy zavatra tsy mety aminao. Mety ho mpamosavy ianao, satria tsy te hiady ianao. Toa tsy mitombina, fa ilay voafonja kosa nilaza fa ireo no fitsipika, izay no atao ny fehezan-dalàna. Ny zavatra dia, tsy afaka manazava mazava tsara ny fitsipi-pifehezana ireo voafonja. Nanazava ny lehilahy iray fa raha tsy miady amin'ny olona iray ny olona iray dia manaraka ny fankatoavana ny kaody io dia mety handona an'io olona io ny sela iray manontolo. Indraindray mety ho voadaroka noho ny famonoana kely indrindra ny lehilahy iray ary indraindray mety ho izy miampanga zavatra tsy tena nataony. "Iza no nangalatra ny haniko?" Tsy misy olona mamaly, ary ny malemy no mandray ny daroka. Tsy manan-kery ianao, mandray an-tsiny ianao. Tsy maintsy manao an'izany izy, satria ho very ny endrika raha tsy izany. Araka ny lazain'ny rehetra ao, mila miady ihany ianao. Manana fitsipika tsy voasoratra voasoratra betsaka izy ireo izay nofihininy, ary ny iray dia antsoina hoe GABOS. Midika izany hoe, "Lalao Miorina amin'ny Sympathy". Tsy toa ny fonja federaly sasany, tsy azo inoana fa hoentin'ny elatry ny sasany ianao. Ny fangalarana dia mihatsaravelatsihy kokoa noho ny fonja, na dia henointsika aza ny momba ny herisetra ny rafitry ny fonja. Midira fotsiny amin'ny forum izay miresaka momba ny traikefany amin'ny fanitsiana ireo gadra taloha rafitra ary ho hitanao ny ankamaroan'izy ireo milaza fa ny fonja no ratsy kokoa. Ny mampihomehy dia ny ankamaroan'ny olona dia mbola tsy hita fa meloka ary voatsabo ratsy kokoa ary miatrika fandrahonana bebe kokoa. Mihorohoro tanteraka ny mpandahatra voalohany ary amin'ny tranga maro dia tokony hisy izany; ara-tsaina tsy salama dia feno entana ao; mahatsiravina ny sakafo; maloto ny sela ary handany ny ankamaroany izy ireo ny fotoanany amin'ny sela. Hahita gadra maro ianao milaza fa hanao «bala» hialana amin'izany hellhole. Ny bala iray dia taona an-tranomaizina. Fa maninona no hody ny fonja any an-trano amin'ny toe-javatra ratsy kokoa, mety ho diso hevitra ianao. Eny, tsy tena notazonany ho ela loatra ny olona iray. Ny olana dia, na dia fohy kely aza dia mety ho ambany ary ny olona sasany dia manao mihoatra noho ny a hijanona vetivety raha nahemotra ny fitsarana azy ireo. Ny gadra dia tokony hanome karazana fampiononana… Ny voafonja dia helo miaraka amin'ny tombontsoa, ​​ny fonja dia mahatsapa fanaintainana tsy tapaka amin'ny purgatory ary amin'ny lafiny ratsy indrindra tsy fantatrao ve ny lalana hivoahana? Noho izany antony izany, ny voafonja dia matetika midika hoe, ary tezitra ary sorena, ary indraindray marina adala tsotra rehefa avy nandry tamin'ny atona naharitra 18 volana. Izany rehetra izany no lazaina, alao sary an-tsaina hoe alefa any amin'ireo ratsy indrindra amin'ireny toerana ireny ianao? Ndeha hiverenantsika aminao fa nentina tany amin'ny rihana faha-6 ao Miami. Vantany vao nandeha tao amin'ny efitra iray ny mpiambina, dia niaiky ireo mpiambina fa tsy afaka mamaly ny herisetra haingana dia ajanony. Niaiky izy ireo fa namela ny voafonja ao amin'ny kaody misy azy ireo. Ireo mpiambina ireo dia nilaza tamim-pahalalana fa tsy misy na inona na inona azon'izy ireo atao momba ny kapoka mafy, ny dikan-dahalo, halatra. Tsy ampy ny anjarany na aiza na aiza ary hahita ny zava-drehetra. Vantany vao lasa ny mpiambina dia avela hiady eny amin'ny rihana faha-5 sy faha-6 ity tranobe ratsy tarehy ity. Fa nahoana? Fa maninona izy ireo no tsy afaka hifanaraka? Nisy voafonja iray namaly izany, ka nilaza hoe: "Ilay kaody no famantarana." Inona ny dikan'izany? Midika izany raha toa ianao ka hita fa manaja olona iray izay iadihanao, dia atokanao. Tsy miady hevitra amin'ny olona iray ianao satria tsy toerana mety hanombohana io. Ny olona tsy avy eny an-dalambe, hoy izy ireo, tsy mahazo ny fehezan-dàlana. Io karazana fihetsika andrefana io dia miverina amin'ny antsoin'ny mpahay siansa hoe, «kolontsaina haja. ” Manala baraka lehilahy ianao, miady ianao, manao sabatra, maka pike folo ianao ary mitifitra. Tany amin'ny tontolo ivelany dia ny ankamaroantsika no nivoahanay tao anatin'izany, fa tao anaty fonja ity fehezan-dalàna ity, ity kolontsain'ny laza ity, dia mbola mihena ihany. Momba ny halatra ary miady ny fonja Mainty any Miami dia nantsoina ho iray amin'ireo ratsy indrindra any Amerika noho ireo karazana herisetra mahazo ny lahy sy vavy. Mety hitranga ny zava-mahatsiravina rehefa ny mpiambina ihany no manambina ny sela indray mandeha. Ireo voafonja mpihaza dia tavela toy ny remby amin'ireo mpiremby tampoka ihany. Soa ihany fa nanao fanatsarana be ny fonja tato anatin'ny taona vitsivitsy, ny iray no betsaka fakan-tsary napetraka. Avy eo dia misy ny resaka fonjan'ny fonja io olona maro izay manao zava-mahadomelina ara-tsaina. Matetika no miady ny mpiray tanàna rehefa marary saina ny olona manao fihetsika amin'ny gadra hafa tsy tia. Araka ny nitaterana ny tetikasa Marshall, "ny rafitra fonjan'i Miami no rafitra lehibe indrindra ho an'ny marary saina any Florida. ” Matetika ny marary saina dia tonga remby, ary miainga amin'ny tany miaraka amin'ny lehilahy 20 mitodika any atsipy. Izany no fomba itondrana ny famindrana. Amin'ny andro tsirairay dia miditra ao an-trano ny lehilahy. Toy ny varavarana mihodina dia feno ra. Raha ny marina dia maro ny herisetra be hoy ny Minisiteran'ny fitsarana nilaza ny Miami-Dade Ny rafitry ny fonja dia tsy voafehy ary ny gadra ary ny mpiambina koa dia niatrika loza maro be. Nisy zavatra tsy maintsy natao, hoy ny sampana. Taona vitsivitsy niatrika ilay fonja dia niatrika fisolokiana be dia be rehefa maty ny olona valo tao anatin'ny dimy volana. Nilaza ny DoJ fa ny fahafatesan'ny olona tsy salama ara-tsaina dia tena manelingelina tokoa. Lehilahy iray nandeha fiarakodia nandritra ny fotoana fampiatoana dia niditra ny asabotsy ary maty ny ampitson'iny Alatsinainy. Roa indray no maty tao anatin'ny herinandro, ary ny kaomisera iray nilaza fa ny rafitra dia, "tapaka tanteraka." Tsiahivina fa olona valo no maty ka nitsambikina tamin'ny toerana iray mba hialana ireo gadra izay nanaraka azy hikapoka azy. Voalaza koa ny antsy. Ny gorodona ratsy indrindra, izay efa nanakatona hatrizay dia nantsoina hoe "gorodona manadino." Izany no ambaratonga fahasivy izay notandreman'ny ankamaroan'ny olona marary saina. Tany no nametrahan'ireo voafonja matetika sy atao tsinontsinona ary matetika ireo no nitondra azy fiainam-piainana. Miverina amin'ny andro amin'ity sehatra ity dia matory amin'ny tany tsy misy lamba firakotra ny voafonja, na dia toy izany aza toeram-pitsaboana ara-tsaina dia noheverina fa olona. Nisy ny gadra sasany no hita fa misotro amin'ny trano fidiovana, ary rehefa naheno izany ny vaovao nantsoina hoe "mahatsiravina". Nisy ny korontana nataon’ny vahoaka. Saingy araka ny henonao dia mbola misy olana rehefa misy mihidy olana ara-tsaina miaraka amin'ireo mpitsikilo an-dalambe sy mpihetraketraka an-dalambe ankehitriny izay tsy misy soatoavina maha-olona. Tsy ny ratsy rehetra fa ratsy toy ireo tantara noresahintsika, ary amin'ny tranga sasany ny olona mampidi-doza na marefo dia hapetraka irery. Na izany aza, mifarana amin'ny iray amin'ireo rihana avo ireo ao amin'ny fonja lehibe ary ho hitanao tokoa toy ny hoe voafatotra ao amin'ny iray amin'ireo gadra maloto indrindra eto an-tany. Misy olana hafa koa, amin'ny ilk mahazatra iray. Tamin'ny taona 2019 dia olona 17 noentina haingana naiditra hopitaly avy tamin'ity toerana ity noho ny aretina tampoka. Mpiasa maromaro no nidina niaraka taminy koa. Inona no nitranga? Tsy nisy nahalala mihitsy. Ny basy baomba aza dia nantsoina taorian'ny nahitana ranon-javatra hafahafa hita, fa nivadika izany hivoaka tsy hahita loza. Ny antony marim-pototra indrindra dia nanomboka namitrika ny setroka ny setroka setroka avy amin'ny poizina sasany zava-mahadomelina. Raha mifoka setroka avy eny lavitra dia mety hampidinina vava ratsy ny olona iray. inona no teto an-tany mety nifoka sigara tao ry zareo? Gasikara ve? Maneho fotsiny ny maha-adala an'io toerana io. Hamela anao miaraka amina famerenana hita tao amin'ny pejy Facebook natokana ho an'ity fonja ity izahay: “Tongasoa eto amin'ny afobe. Aleo maty kokoa ny olona iray fa tsy miaritra ny fanararaotana sy ny fampijalian-tsofina amin'ity mpanjaitra maloto sy maharikoriko ity. ” Tsy te halefa any amin'ny fonja any Miami ianao fa te-tsindrio amin'ireto roa ireto horonan-tsary. Ka mandehana mijery ity horonantsary ity ankehitriny ho an'ny horonantsary mahafinaritra hafa avy amin'ny The Infographics Show na amin'ity iray ity ambonin'io. Azonao atao ny misafidy iray ihany na dia safidio ary handeha hijery horonan-tsary hafa izao!
Tafiditra any amin&#39;ny fonja any Miami - Fonjan&#39;ny afobe
<text sub="clublinks" start="1" dur="4.029"> Voampanga ho nanao heloka bevava ianao izay nanizingizina fa tsy nataonao. </text>
<text sub="clublinks" start="5.029" dur="4.521"> Ianao tsy manan-tsiny mandra-voaporofo fa meloka mazava ho azy, fa mety ho elaela ihany io datin'ny fitsarana io </text>
<text sub="clublinks" start="9.55" dur="1"> tonga. </text>
<text sub="clublinks" start="10.55" dur="4.18"> Mandritra izany fotoana izany dia ny fonenanao no hantsoina hoe Japoney Mega Jail. </text>
<text sub="clublinks" start="14.73" dur="3.93"> Mbola tanora ianao ary, tsy mbola nigadra mihitsy taloha ary tsy olona henjana ianao, koa rehefa </text>
<text sub="clublinks" start="18.66" dur="3.42"> nentina any amin'ny gorodona izay hipetrahanao ianao fa tsy hino izay hitanao. </text>
<text sub="clublinks" start="22.08" dur="5.45"> Vondron'olona sela feno lehilahy, nihorakoraka, niantsoantso, nanatona ny bara sy nandrahona </text>
<text sub="clublinks" start="27.53" dur="1"> ianao. </text>
<text sub="clublinks" start="28.53" dur="1"> Miteraka korontana izany. </text>
<text sub="clublinks" start="29.53" dur="4.32"> Ny fiandrasana anao ao amin'ny efitranonao dia komity fandraisana olona lehilahy 20 tezitra sy mampidi-doza. </text>
<text sub="clublinks" start="33.85" dur="4.26"> Tsy manan-java-misy amin'ireo bandy ireo ianao fa mila miady, ary aza manadino </text>
<text sub="clublinks" start="38.11" dur="1"> izany. </text>
<text sub="clublinks" start="39.11" dur="2.04"> Vao niditra teo amin'ny sehatry ny ady an-tany ianao. </text>
<text sub="clublinks" start="41.15" dur="4.83"> Sarotra ny misafidy izay fonja faratampony ratsy indrindra any Etazonia satria mampalahelo fa misy marobe </text>
<text sub="clublinks" start="45.98" dur="4.989"> toerana izay afaka mifaninana mba ho eo an-tampony, na angamba azontsika lazaina ambany, ao amin'ilay lisitra. </text>
<text sub="clublinks" start="50.969" dur="3.721"> Izay rehetra nijanona teo amin'ilay toerana horesahantsika anio dia tsy ho sosotra </text>
<text sub="clublinks" start="54.69" dur="2.869"> nifidy izany ho ratsy indrindra isika, azo antoka izany. </text>
<text sub="clublinks" start="57.559" dur="3.631"> Tokony hiteny isika fa raha miresaka amin'ireo mpanao heloka bevava efa niditra sy nigadra ianao </text>
<text sub="clublinks" start="61.19" dur="3.35"> sy fonja matetika dia hiteny aminao hoe ratsy kokoa ny fonja. </text>
<text sub="clublinks" start="64.54" dur="3.38"> Betsaka ny olona milaza fa mahery noho ny fonja ny fonja ary mahery setra kokoa. </text>
<text sub="clublinks" start="67.92" dur="3.61"> Ilay toerana resahantsika anio dia nantsoina hoe: "Afobe ao amin'ny Paradisa" ary aorian'io </text>
<text sub="clublinks" start="71.53" dur="2.62"> ny fikarohana ataontsika dia tsy hanaiky. </text>
<text sub="clublinks" start="74.15" dur="4.3"> Ny tena resahantsika dia antsoina hoe "Miami-Dade Corrections and Rehabilitation." </text>
<text sub="clublinks" start="78.45" dur="4.63"> Sampana ”, izay misy ny vondrona maro ao anatin'izany ny toby Boot Camp malaza. </text>
<text sub="clublinks" start="83.08" dur="3.6"> Ireo tsy mandalo izany toby izany dia hiafara any am-ponja ary ny sasany amin'izy ireo dia mbola </text>
<text sub="clublinks" start="86.68" dur="1"> tamin'ny tanorany. </text>
<text sub="clublinks" start="87.68" dur="4.11"> Ny Boot Camp dia tantara hafa tanteraka, fa kosa hoy isika raha oharina amin'ny fonja dia </text>
<text sub="clublinks" start="91.79" dur="1.14"> toby fialantsasatra. </text>
<text sub="clublinks" start="92.93" dur="5.5"> Ny rafitra iray manontolo dia mipetraka manodidina ny olona 7000, na dia misy toa ny olona 11000 000 aza </text>
<text sub="clublinks" start="98.43" dur="4.2"> mandalo eo am-baravarana isan-taona - izany dia eo amin'ny 312 isan'andro. </text>
<text sub="clublinks" start="102.63" dur="2.11"> Toerana sahirana io, azo antoka. </text>
<text sub="clublinks" start="104.74" dur="3.48"> Mbola misy ihany anefa ny rafitra fonja faha-7 lehibe indrindra any Etazonia. </text>
<text sub="clublinks" start="108.22" dur="3.64"> Ny ankamaroan'ny voafonja dia tsy handany fotoana be ao ary ny fotoana salan'isa amin'ny fandaharana manontolo </text>
<text sub="clublinks" start="111.86" dur="4.07"> vao 22 andro fotsiny, fa ho hitanao ihany koa ireo olona niandry fitsarana raha mbola hatrizay </text>
<text sub="clublinks" start="115.93" dur="1.74"> dimy taona. </text>
<text sub="clublinks" start="117.67" dur="4.229"> Izany dia mitondra antsika amin'ny iray amin'ireo vondrona lehibe, ilay toerana iray izay tena lohalaharana indrindra amin'ny lohateny </text>
<text sub="clublinks" start="121.899" dur="1.151"> noho ny toe-piainana feno habibiana. </text>
<text sub="clublinks" start="123.05" dur="4.98"> Antsoina hoe «Pre-Trial Det Center Center», na nantsoina hoe Jeneraly Mainty. </text>
<text sub="clublinks" start="128.03" dur="3.34"> Matetika izy ireo dia mipetraka eo amin'ny olona 70000 isaky ny mandeha. </text>
<text sub="clublinks" start="131.37" dur="3.83"> Ny ankamaroan'ny olona dia mbola misy tsy manan-kery ara-teknika satria tsy mbola voaporofo </text>
<text sub="clublinks" start="135.2" dur="2.77"> meloka, fa miandry ny datin'ny fitsarana mety haharitra taona maro. </text>
<text sub="clublinks" start="137.97" dur="3.96"> Tsy mora ny manoritra rehefa misy karazana limbo, ary raha mandalo ireo sela ianao </text>
<text sub="clublinks" start="141.93" dur="2.89"> gorodona sasany dia ho hitanao hoe manao ahoana ny fiainana. </text>
<text sub="clublinks" start="144.82" dur="3.559"> Misy ny gadra izay miala mihitsy aza fa miady amin'ny tranga misy azy ireo satria te-hahazo fotsiny </text>
<text sub="clublinks" start="148.379" dur="3.781"> raha any ivelany, tsy manan-tsiny na tsia, tadiaviny fotsiny no hidirana am-ponja. </text>
<text sub="clublinks" start="152.16" dur="3.7"> Ny gorodona ratsy indrindra dia aiza no itehirizan'ireo voalaza fa meloka izay tena mampidi-doza ary ireo </text>
<text sub="clublinks" start="155.86" dur="1.22"> rihana dimy sy enina. </text>
<text sub="clublinks" start="157.08" dur="4.44"> Ny sela eto matetika dia mipetraka ao amin'ny lehilahy 15 ka hatramin'ny 25 ary ao anatin'ity vondrona ity </text>
<text sub="clublinks" start="161.52" dur="1.249"> karazana ambaratonga iray. </text>
<text sub="clublinks" start="162.769" dur="4.382"> Araky ny ilazan'ireo bandy ao azy dia maro no mahavelona azy, ka raha tsy izany ianao </text>
<text sub="clublinks" start="167.151" dur="2.599"> ny mpiady mety ho sahirana ianao. </text>
<text sub="clublinks" start="169.75" dur="2.6"> Mila bunk kely ianao, mila miady amin'izany ianao. </text>
<text sub="clublinks" start="172.35" dur="3.49"> Eny, tsy mampaninona anao ny manana toerana ratsy indrindra ao amin'ny sela, fa ahoana kosa raha misy olona </text>
<text sub="clublinks" start="175.84" dur="1.02"> maka ny entanao? </text>
<text sub="clublinks" start="176.86" dur="2.599"> Araka ny nolazain'ny voafonja iray tao, "manararaotra ny malemy aho." </text>
<text sub="clublinks" start="179.459" dur="3.691"> Raha tsy miady amin'ny zavatrao ianao dia hanana helo iray, ary midika izany isika ao </text>
<text sub="clublinks" start="183.15" dur="1.19"> ny ratsy. </text>
<text sub="clublinks" start="184.34" dur="4.72"> Raha mandroritra ianao dia ho voadaroka na aiza na aiza alehanao raha tsy voaaro ianao. </text>
<text sub="clublinks" start="189.06" dur="3.899"> Araka ny nolazain'ny voafonja iray tamin'ny resadresaka tamin'ny andro voalohany taminao tao amin'ny sela iray dia mila miady ianao </text>
<text sub="clublinks" start="192.959" dur="2.301"> tsotra fotsiny satria te-hanadino anao izy amin'ny maha lehilahy. </text>
<text sub="clublinks" start="195.26" dur="1"> Fa nahoana? </text>
<text sub="clublinks" start="196.26" dur="3.38"> Ny valinteniny dia raha tsy miady ianao dia marika fa misy zavatra tsy mety aminao. </text>
<text sub="clublinks" start="199.64" dur="2.269"> Mety ho mpamosavy ianao, satria tsy te hiady ianao. </text>
<text sub="clublinks" start="201.909" dur="4.151"> Toa tsy mitombina, fa ilay voafonja kosa nilaza fa ireo no fitsipika, izay no atao ny fehezan-dalàna. </text>
<text sub="clublinks" start="206.06" dur="4.04"> Ny zavatra dia, tsy afaka manazava mazava tsara ny fitsipi-pifehezana ireo voafonja. </text>
<text sub="clublinks" start="210.1" dur="4.67"> Nanazava ny lehilahy iray fa raha tsy miady amin'ny olona iray ny olona iray dia manaraka ny fankatoavana ny </text>
<text sub="clublinks" start="214.77" dur="2.87"> kaody io dia mety handona an'io olona io ny sela iray manontolo. </text>
<text sub="clublinks" start="217.64" dur="3.33"> Indraindray mety ho voadaroka noho ny famonoana kely indrindra ny lehilahy iray ary indraindray mety ho izy </text>
<text sub="clublinks" start="220.97" dur="2"> miampanga zavatra tsy tena nataony. </text>
<text sub="clublinks" start="222.97" dur="1.5"> "Iza no nangalatra ny haniko?" </text>
<text sub="clublinks" start="224.47" dur="3.03"> Tsy misy olona mamaly, ary ny malemy no mandray ny daroka. </text>
<text sub="clublinks" start="227.5" dur="1.849"> Tsy manan-kery ianao, mandray an-tsiny ianao. </text>
<text sub="clublinks" start="229.349" dur="2.851"> Tsy maintsy manao an'izany izy, satria ho very ny endrika raha tsy izany. </text>
<text sub="clublinks" start="232.2" dur="2.7"> Araka ny lazain'ny rehetra ao, mila miady ihany ianao. </text>
<text sub="clublinks" start="234.9" dur="4.039"> Manana fitsipika tsy voasoratra voasoratra betsaka izy ireo izay nofihininy, ary ny iray dia antsoina hoe GABOS. </text>
<text sub="clublinks" start="238.939" dur="3.281"> Midika izany hoe, "Lalao Miorina amin'ny Sympathy". </text>
<text sub="clublinks" start="242.22" dur="3.82"> Tsy toa ny fonja federaly sasany, tsy azo inoana fa hoentin'ny elatry ny sasany ianao. </text>
<text sub="clublinks" start="246.04" dur="4.059"> Ny fangalarana dia mihatsaravelatsihy kokoa noho ny fonja, na dia henointsika aza ny momba ny herisetra </text>
<text sub="clublinks" start="250.099" dur="1.081"> ny rafitry ny fonja. </text>
<text sub="clublinks" start="251.18" dur="4.01"> Midira fotsiny amin'ny forum izay miresaka momba ny traikefany amin'ny fanitsiana ireo gadra taloha </text>
<text sub="clublinks" start="255.19" dur="3.53"> rafitra ary ho hitanao ny ankamaroan'izy ireo milaza fa ny fonja no ratsy kokoa. </text>
<text sub="clublinks" start="258.72" dur="4.55"> Ny mampihomehy dia ny ankamaroan'ny olona dia mbola tsy hita fa meloka ary voatsabo </text>
<text sub="clublinks" start="263.27" dur="2.01"> ratsy kokoa ary miatrika fandrahonana bebe kokoa. </text>
<text sub="clublinks" start="265.28" dur="4.35"> Mihorohoro tanteraka ny mpandahatra voalohany ary amin'ny tranga maro dia tokony hisy izany; ara-tsaina </text>
<text sub="clublinks" start="269.63" dur="4.68"> tsy salama dia feno entana ao; mahatsiravina ny sakafo; maloto ny sela ary handany ny ankamaroany izy ireo </text>
<text sub="clublinks" start="274.31" dur="1.3"> ny fotoanany amin'ny sela. </text>
<text sub="clublinks" start="275.61" dur="3.36"> Hahita gadra maro ianao milaza fa hanao «bala» hialana amin'izany </text>
<text sub="clublinks" start="278.97" dur="1"> hellhole. </text>
<text sub="clublinks" start="279.97" dur="1.669"> Ny bala iray dia taona an-tranomaizina. </text>
<text sub="clublinks" start="281.639" dur="3.121"> Fa maninona no hody ny fonja any an-trano amin'ny toe-javatra ratsy kokoa, mety ho diso hevitra ianao. </text>
<text sub="clublinks" start="284.76" dur="3.159"> Eny, tsy tena notazonany ho ela loatra ny olona iray. </text>
<text sub="clublinks" start="287.919" dur="4.191"> Ny olana dia, na dia fohy kely aza dia mety ho ambany ary ny olona sasany dia manao mihoatra noho ny a </text>
<text sub="clublinks" start="292.11" dur="2.149"> hijanona vetivety raha nahemotra ny fitsarana azy ireo. </text>
<text sub="clublinks" start="294.259" dur="2.171"> Ny gadra dia tokony hanome karazana fampiononana… </text>
<text sub="clublinks" start="296.43" dur="4.72"> Ny voafonja dia helo miaraka amin'ny tombontsoa, ​​ny fonja dia mahatsapa fanaintainana tsy tapaka amin'ny purgatory ary amin'ny lafiny ratsy indrindra </text>
<text sub="clublinks" start="301.15" dur="1.859"> tsy fantatrao ve ny lalana hivoahana? </text>
<text sub="clublinks" start="303.009" dur="4.111"> Noho izany antony izany, ny voafonja dia matetika midika hoe, ary tezitra ary sorena, ary indraindray marina </text>
<text sub="clublinks" start="307.12" dur="3.63"> adala tsotra rehefa avy nandry tamin'ny atona naharitra 18 volana. </text>
<text sub="clublinks" start="310.75" dur="3.13"> Izany rehetra izany no lazaina, alao sary an-tsaina hoe alefa any amin'ireo ratsy indrindra amin'ireny toerana ireny ianao? </text>
<text sub="clublinks" start="313.88" dur="4.379"> Ndeha hiverenantsika aminao fa nentina tany amin'ny rihana faha-6 ao Miami. </text>
<text sub="clublinks" start="318.259" dur="3.861"> Vantany vao nandeha tao amin'ny efitra iray ny mpiambina, dia niaiky ireo mpiambina fa tsy afaka mamaly </text>
<text sub="clublinks" start="322.12" dur="2.03"> ny herisetra haingana dia ajanony. </text>
<text sub="clublinks" start="324.15" dur="2.57"> Niaiky izy ireo fa namela ny voafonja ao amin'ny kaody misy azy ireo. </text>
<text sub="clublinks" start="326.72" dur="3.6"> Ireo mpiambina ireo dia nilaza tamim-pahalalana fa tsy misy na inona na inona azon'izy ireo atao momba ny kapoka mafy, ny </text>
<text sub="clublinks" start="330.32" dur="1.37"> dikan-dahalo, halatra. </text>
<text sub="clublinks" start="331.69" dur="3.34"> Tsy ampy ny anjarany na aiza na aiza ary hahita ny zava-drehetra. </text>
<text sub="clublinks" start="335.03" dur="4.17"> Vantany vao lasa ny mpiambina dia avela hiady eny amin'ny rihana faha-5 sy faha-6 </text>
<text sub="clublinks" start="339.2" dur="2.469"> ity tranobe ratsy tarehy ity. </text>
<text sub="clublinks" start="341.669" dur="1"> Fa nahoana? </text>
<text sub="clublinks" start="342.669" dur="1.361"> Fa maninona izy ireo no tsy afaka hifanaraka? </text>
<text sub="clublinks" start="344.03" dur="2.729"> Nisy voafonja iray namaly izany, ka nilaza hoe: "Ilay kaody no famantarana." </text>
<text sub="clublinks" start="346.759" dur="1.19"> Inona ny dikan'izany? </text>
<text sub="clublinks" start="347.949" dur="3.981"> Midika izany raha toa ianao ka hita fa manaja olona iray izay iadihanao, dia atokanao. </text>
<text sub="clublinks" start="351.93" dur="4.2"> Tsy miady hevitra amin'ny olona iray ianao satria tsy toerana mety hanombohana io. </text>
<text sub="clublinks" start="356.13" dur="4.349"> Ny olona tsy avy eny an-dalambe, hoy izy ireo, tsy mahazo ny fehezan-dàlana. </text>
<text sub="clublinks" start="360.479" dur="3.681"> Io karazana fihetsika andrefana io dia miverina amin'ny antsoin'ny mpahay siansa hoe, «kolontsaina </text>
<text sub="clublinks" start="364.16" dur="1"> haja. ” </text>
<text sub="clublinks" start="365.16" dur="4.09"> Manala baraka lehilahy ianao, miady ianao, manao sabatra, maka pike folo ianao ary mitifitra. </text>
<text sub="clublinks" start="369.25" dur="4.069"> Tany amin'ny tontolo ivelany dia ny ankamaroantsika no nivoahanay tao anatin'izany, fa tao anaty fonja </text>
<text sub="clublinks" start="373.319" dur="3.231"> ity fehezan-dalàna ity, ity kolontsain'ny laza ity, dia mbola mihena ihany. </text>
<text sub="clublinks" start="376.55" dur="4.18"> Momba ny halatra ary miady ny fonja Mainty any Miami dia nantsoina ho iray amin'ireo ratsy indrindra </text>
<text sub="clublinks" start="380.73" dur="3.23"> any Amerika noho ireo karazana herisetra mahazo ny lahy sy vavy. </text>
<text sub="clublinks" start="383.96" dur="3.84"> Mety hitranga ny zava-mahatsiravina rehefa ny mpiambina ihany no manambina ny sela indray mandeha. </text>
<text sub="clublinks" start="387.8" dur="3.54"> Ireo voafonja mpihaza dia tavela toy ny remby amin'ireo mpiremby tampoka ihany. </text>
<text sub="clublinks" start="391.34" dur="4.09"> Soa ihany fa nanao fanatsarana be ny fonja tato anatin'ny taona vitsivitsy, ny iray no betsaka </text>
<text sub="clublinks" start="395.43" dur="2.269"> fakan-tsary napetraka. </text>
<text sub="clublinks" start="397.699" dur="4.44"> Avy eo dia misy ny resaka fonjan'ny fonja io olona maro izay manao zava-mahadomelina ara-tsaina. </text>
<text sub="clublinks" start="402.139" dur="4.241"> Matetika no miady ny mpiray tanàna rehefa marary saina ny olona manao fihetsika amin'ny gadra hafa </text>
<text sub="clublinks" start="406.38" dur="1"> tsy tia. </text>
<text sub="clublinks" start="407.38" dur="3.88"> Araka ny nitaterana ny tetikasa Marshall, "ny rafitra fonjan'i Miami no rafitra lehibe indrindra ho an'ny </text>
<text sub="clublinks" start="411.26" dur="1.7"> marary saina any Florida. ” </text>
<text sub="clublinks" start="412.96" dur="4.42"> Matetika ny marary saina dia tonga remby, ary miainga amin'ny tany miaraka amin'ny lehilahy 20 </text>
<text sub="clublinks" start="417.38" dur="1.39"> mitodika any atsipy. </text>
<text sub="clublinks" start="418.77" dur="2.23"> Izany no fomba itondrana ny famindrana. </text>
<text sub="clublinks" start="421" dur="2.58"> Amin'ny andro tsirairay dia miditra ao an-trano ny lehilahy. </text>
<text sub="clublinks" start="423.58" dur="2.25"> Toy ny varavarana mihodina dia feno ra. </text>
<text sub="clublinks" start="425.83" dur="4.18"> Raha ny marina dia maro ny herisetra be hoy ny Minisiteran'ny fitsarana nilaza ny Miami-Dade </text>
<text sub="clublinks" start="430.01" dur="5.409"> Ny rafitry ny fonja dia tsy voafehy ary ny gadra ary ny mpiambina koa dia niatrika loza maro be. </text>
<text sub="clublinks" start="435.419" dur="1.84"> Nisy zavatra tsy maintsy natao, hoy ny sampana. </text>
<text sub="clublinks" start="437.259" dur="4.771"> Taona vitsivitsy niatrika ilay fonja dia niatrika fisolokiana be dia be rehefa maty ny olona valo tao anatin'ny dimy volana. </text>
<text sub="clublinks" start="442.03" dur="5.1"> Nilaza ny DoJ fa ny fahafatesan'ny olona tsy salama ara-tsaina dia tena manelingelina tokoa. </text>
<text sub="clublinks" start="447.13" dur="4.39"> Lehilahy iray nandeha fiarakodia nandritra ny fotoana fampiatoana dia niditra ny asabotsy ary maty ny ampitson'iny </text>
<text sub="clublinks" start="451.52" dur="1"> Alatsinainy. </text>
<text sub="clublinks" start="452.52" dur="3.869"> Roa indray no maty tao anatin'ny herinandro, ary ny kaomisera iray nilaza fa ny rafitra dia, "tapaka tanteraka." </text>
<text sub="clublinks" start="456.389" dur="4.601"> Tsiahivina fa olona valo no maty ka nitsambikina tamin'ny toerana iray mba hialana ireo gadra </text>
<text sub="clublinks" start="460.99" dur="1.76"> izay nanaraka azy hikapoka azy. </text>
<text sub="clublinks" start="462.75" dur="1.62"> Voalaza koa ny antsy. </text>
<text sub="clublinks" start="464.37" dur="4.04"> Ny gorodona ratsy indrindra, izay efa nanakatona hatrizay dia nantsoina hoe "gorodona manadino." </text>
<text sub="clublinks" start="468.41" dur="3.979"> Izany no ambaratonga fahasivy izay notandreman'ny ankamaroan'ny olona marary saina. </text>
<text sub="clublinks" start="472.389" dur="3.861"> Tany no nametrahan'ireo voafonja matetika sy atao tsinontsinona ary matetika ireo no nitondra azy </text>
<text sub="clublinks" start="476.25" dur="1.55"> fiainam-piainana. </text>
<text sub="clublinks" start="477.8" dur="3.92"> Miverina amin'ny andro amin'ity sehatra ity dia matory amin'ny tany tsy misy lamba firakotra ny voafonja, na dia toy izany aza </text>
<text sub="clublinks" start="481.72" dur="2.91"> toeram-pitsaboana ara-tsaina dia noheverina fa olona. </text>
<text sub="clublinks" start="484.63" dur="3.759"> Nisy ny gadra sasany no hita fa misotro amin'ny trano fidiovana, ary rehefa naheno izany ny vaovao </text>
<text sub="clublinks" start="488.389" dur="1.24"> nantsoina hoe "mahatsiravina". </text>
<text sub="clublinks" start="489.629" dur="1.401"> Nisy ny korontana nataon’ny vahoaka. </text>
<text sub="clublinks" start="491.03" dur="3.65"> Saingy araka ny henonao dia mbola misy olana rehefa misy mihidy olana ara-tsaina </text>
<text sub="clublinks" start="494.68" dur="5.84"> miaraka amin'ireo mpitsikilo an-dalambe sy mpihetraketraka an-dalambe ankehitriny izay tsy misy soatoavina maha-olona. </text>
<text sub="clublinks" start="500.52" dur="4.84"> Tsy ny ratsy rehetra fa ratsy toy ireo tantara noresahintsika, ary amin'ny tranga sasany </text>
<text sub="clublinks" start="505.36" dur="2.81"> ny olona mampidi-doza na marefo dia hapetraka irery. </text>
<text sub="clublinks" start="508.17" dur="4.24"> Na izany aza, mifarana amin'ny iray amin'ireo rihana avo ireo ao amin'ny fonja lehibe ary ho hitanao tokoa </text>
<text sub="clublinks" start="512.41" dur="4.66"> toy ny hoe voafatotra ao amin'ny iray amin'ireo gadra maloto indrindra eto an-tany. </text>
<text sub="clublinks" start="517.07" dur="3.82"> Misy olana hafa koa, amin'ny ilk mahazatra iray. </text>
<text sub="clublinks" start="520.89" dur="5.35"> Tamin'ny taona 2019 dia olona 17 noentina haingana naiditra hopitaly avy tamin'ity toerana ity noho ny aretina tampoka. </text>
<text sub="clublinks" start="526.24" dur="1.76"> Mpiasa maromaro no nidina niaraka taminy koa. </text>
<text sub="clublinks" start="528" dur="1"> Inona no nitranga? </text>
<text sub="clublinks" start="529" dur="1.35"> Tsy nisy nahalala mihitsy. </text>
<text sub="clublinks" start="530.35" dur="3.66"> Ny basy baomba aza dia nantsoina taorian'ny nahitana ranon-javatra hafahafa hita, fa nivadika izany </text>
<text sub="clublinks" start="534.01" dur="1.09"> hivoaka tsy hahita loza. </text>
<text sub="clublinks" start="535.1" dur="4.23"> Ny antony marim-pototra indrindra dia nanomboka namitrika ny setroka ny setroka setroka avy amin'ny poizina sasany </text>
<text sub="clublinks" start="539.33" dur="1"> zava-mahadomelina. </text>
<text sub="clublinks" start="540.33" dur="3.75"> Raha mifoka setroka avy eny lavitra dia mety hampidinina vava ratsy ny olona iray. </text>
<text sub="clublinks" start="544.08" dur="2.24"> inona no teto an-tany mety nifoka sigara tao ry zareo? </text>
<text sub="clublinks" start="546.32" dur="1"> Gasikara ve? </text>
<text sub="clublinks" start="547.32" dur="2.36"> Maneho fotsiny ny maha-adala an'io toerana io. </text>
<text sub="clublinks" start="549.68" dur="4.37"> Hamela anao miaraka amina famerenana hita tao amin'ny pejy Facebook natokana ho an'ity fonja ity izahay: </text>
<text sub="clublinks" start="554.05" dur="1.12"> “Tongasoa eto amin'ny afobe. </text>
<text sub="clublinks" start="555.17" dur="4.77"> Aleo maty kokoa ny olona iray fa tsy miaritra ny fanararaotana sy ny fampijalian-tsofina </text>
<text sub="clublinks" start="559.94" dur="3.05"> amin'ity mpanjaitra maloto sy maharikoriko ity. ” </text>
<text sub="clublinks" start="562.99" dur="4.21"> Tsy te halefa any amin'ny fonja any Miami ianao fa te-tsindrio amin'ireto roa ireto </text>
<text sub="clublinks" start="567.2" dur="1"> horonan-tsary. </text>
<text sub="clublinks" start="568.2" dur="4.36"> Ka mandehana mijery ity horonantsary ity ankehitriny ho an'ny horonantsary mahafinaritra hafa avy amin'ny The Infographics Show na amin'ity iray ity </text>
<text sub="clublinks" start="572.56" dur="1"> ambonin'io. </text>
<text sub="clublinks" start="573.56" dur="3.48"> Azonao atao ny misafidy iray ihany na dia safidio ary handeha hijery horonan-tsary hafa izao! </text>